क्रिस्टिना रिक्कीले टिम बर्टनको 'एडम्स परिवार' स्पिन-अफमा उत्पादन लपेटेको छ।
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	क्रिस्टिना रिक्कीले टिम बर्टनको 'एडम्स परिवार' स्पिन-अफमा उत्पादन लपेटेको छ।
हामी हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं
by ट्रे हिल्बर्न III अप्रिल 20, 2022
by ट्रे हिल्बर्न III अप्रिल 20, 2022 144,444 हेराइहरू
Netflix को आगामी बुधवार टिम बर्टनको उत्पादन हो, जसले पहिले नै चीजलाई विशेष बनाउँछ। त्यसमा क्रिस्टिना रिक्कीलाई श्रृंखलामा बुधवार एडम्स खेल्ने जेन्ना ओर्टेगासँगै कलाकारमा थपियो। यस्तो देखिन्छ कि आज रिक्कीले श्रृंखलामा उत्पादन र्‍याप गर्यो र यसको मतलब हामी समाप्त उत्पादनको नजिक पुगेका छौं।
श्रृंखलामा रिक्कीको भूमिका अझै पूर्ण रूपमा खुलासा गरिएको छैन। यद्यपि उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । त्यसोभए, यो कुनै पनि हिसाबले सस्तो क्यामियो हुने छैन। यदि रिक्की ओर्टेगाको भविष्यको स्वयम् हो भने यो कत्ति राम्रो हुनेछ? मेरो मतलब, या त त्यो हुन गइरहेको छ वा रिक्कीले उसलाई खलनायक खेल्न आवश्यक छ। हामीलाई केहि राम्रो दिनुहोस्, टिम बर्टन।
Addams परिवार मोर्टिसिया र गोमेजको भूमिकामा स्पिन-अफ स्टार क्याथरिन जेटा-जोन्स र लुइस गुजम्यान! त्यो कम्बो एक्लै हेर्न पाउनु राम्रो हुनेछ! हामी आशा गर्छौं कि यो स्पिन अफ अन्ततः हामीलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता लैजान्छ Addams परिवार यो कलाकार संग चलचित्र। औंलाहरू पार गरे।
बर्टनको लागि सारांश बुधवार यो जस्तो जान्छ:
बुधवारको उनको उदीयमान मनोवैज्ञानिक क्षमतामा महारत हासिल गर्ने प्रयासहरू, स्थानीय सहरलाई आतंकित पार्ने राक्षसी हत्याको चहलपहललाई विफल पार्ने, र 25 वर्ष पहिले उनका आमाबाबुलाई समाहित गर्ने अलौकिक रहस्यको समाधान गर्ने - सबैले नेभरमोरमा उनको नयाँ र धेरै जटिल सम्बन्धहरू नेभिगेट गर्दा।
हामी तपाईंलाई सबै चीजहरूमा पोस्ट राख्नेछौं बुधवार हामीले थप जानकारी पाउने बित्तिकै!
त्यतिन्जेल, यहाँ हाम्रा केही मनपर्नेहरू छन् क्रिस्टिना रिक्की पल को रूप मा बुधवार!